Bilxiginnaan farra tokkummaa Oromooti!! – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosBilxiginnaan farra tokkummaa Oromooti!!
Beektoonni Amaaraa dhiheenya kana marii tokko godhanii turan. Marii kanaratti hayyoonni fii hoggantoota paartii ABN fi PP damee kaabaa itti hirmaataniiru. PP fi MNA irraa marii kanaratti kan hirmaate Ministeera daldalaa Malaaku Alabal fi prezidantii itti aantuu naannoo Amaaraa Dr. Mulunesh Ababaati. Qabxilee mariin itti godhame namni naaf erge dhugaa ta’uu mirkaneesuuf viidiyoo xiqqoo takkas irraa qicee naaf ergeera.
⚡️ Ajandaan tokko ABIN fi Bilxignnaan walitti dhufanii hojjachuun bu’aa akkamii akka qabaatu mari’achuu ture.
Waa’yee paartilee lamaanii ilaalchisee kan jala sararanii dubbatan, paartiin amaaraa kamuu yeroo ammaa kanatti paartii biyya bulchaa jiru kana sababa itti dinoomfatu hinqabu kan jedhu ture. Hayyuun Dr. Gabayaanah jedhamu tokko “hoggantoonni PP kan federaalaa yaada isaanii lafarra buusuutu isaan rakkise malee fedhiin isaanii fedhii keenyaan ala miti. Jijiirama guddaa argaa jira. Hogantoonni ABIN abshaalumaadhan socho’aa. Uummanni keenya kaabaanis kibbaanis har’as dinootuma kaleessaa saniin marfamee jiraachuu isaa hin dagatinaa. Paartiin kun (PPn) diinoota uummata Amaaraa lafarraa haxaa’uuf hojii guddaa hojjachaa jira. Yeroo ammaa kanatti yoo danda’ame waan hundaan bira dhaabachuu. Danda’amuu baannaan qeeqa miidiyaa irratti godhamu hirr’isuu qabna.” jedhe. Miseensi ABIN tokko “nutiis isa waakkachaa hinjirru. Ummanni amaaraas kana ni hubata. Garuu yaanni PP lafarra hojiidhaan mul’achu baannaan amma yoomitti uummata keenyaan obsaa jenna.Waldhabii waan xixiqqoo irratti qabnu keessatti fixachuuf ammas nuti qophiidha.” jedhe.
Hubataniirtu yoo ta’e ABINfi PPn dhiyeenya kanaratti waan hunda irratti ejjannoon isaanii tokko ta’eera. Fulbaana booda eenyutu biyya bulchuu qaba falmii jedhuu irrati ABIN dura bahee PPn itti fufu qaba.Yaada mootummaa cee’umsaa jedhu hin fudhannu” jedhe. Dubiin “Fanqiil jedhamu sun yeroo hafarfamu, ABIN “uumanni Tigray bilisa ba’uu qaba. Sochii fanqiil ni deeggarra” jedhee ibsa baase. Gabaasa Amnestiin baasee PP fi ABIN walumaan morman. ABIN PPn kana caala ummata Oromoo irratti gara jabina akka agarsistu barbaada. Walumaagala Bilxiginnaan erga hundoofte hoggantoonni ABIN tasgabaa’aniiru. PPnis isaan waliin waldhibdee hin qabdu. Duula paartilee Oromoo irratti godhamaa jiru garuu argaa jirtu. Uumanni Oromoo PPn maal akka taate kanarraa hubachuu danda’a.
⚡️ Marrii kanarratti ajandaan ka’e inni biraan magaalaa Finfinnee ilaalchisee tarsiimoo akkamiitu nubarbaachisa kan jedhu ture.
Hayyuun tokko kanarattis akkas jedhee jalqabe. “Dogoggoorri waggaa 28 dabran kana keessatti hojjanne inni guddaan, Addis Ababan (Finfinneen) kan saba tokkooti ilaalcha jedhu dura dhaabachuu dhabuu keenya. Kun har’a uummata amaaraa dararaa hamaaf saaxilee jira. Walitti baquu kessan dura waan kana kaafnee ture. Addis Ababa bulchuuf dabareen nuuf kennamuu akka qabu kaasuu keessan nutti himtaniirtu. Kana dhugoomsuuf maaliif dadhabdan? Waa’yee magaalattii maaltu yaadame?” jedhee gaafate.
Ministeerichi “dubbiin Addis Ababa (Finfinnee) lafarra harkifachaa jiraachuun isaa dhugaadha. Ajjeechaa hogantoota keenya waxxabajii 15 dura amma tokko dubbiin kun fulduratti tarkaanfatee ture. Ergasii xiyyeefannoon hundi walitti baquu paartiilee irratti waan tureef kana kaasuuf haalli hin mijoofne. Garuu waa’yee Addis Ababa (Finfinnee) hin dagganne. Akka APPitti marii itti gochaa jirra”. Namni Dr. Yonas jedhamu ammo “Kantibaan ammaa saba tokko irratti xiyyeefatee hojjachaa jira.
Mariin jiraattoota magalaa waliin godhamuu afaan biraatiin ta’uu jalqabeera. (Afaan Oromoo jechuu isaati). Komiin akkanaa ummata irraa ka’aa jira. Waan kanarratti Muumicha Ministeeraa itti aanaa (Dammaqa Makonniin) waliin mari’annee jirra. Isa naaf dhiisaa jedhee ture. Garuu APPn rakkina isinitti himamu dhagahuu malee furuu irratti hanqinoota qabdu. Kuni waldaa kanas ta’e uummata keenya yaaddeessaa jira. Bulchitoonni midiyaa maalirra xiyeefachuu akka qaban waliin dubbaneerra. CEOn EBC Dr. Nigusee Mitikuun barreessaa waldaa beektoota Amaaraa ture.Inni osoo itti hin himinuu siyaasaa Finfinnee nama hubatuu dha. Ijooleen Walta TV keessa jiranis wal quba qabna. ASRAT miidiyaanis itti hojjachaa jiru. Garuu miidiyaan kun hanqina maalaqaatiin cufamuuf qarreerra jira. MNAn miidiyaa kana deeggaruu qabdu. Miidiyaa hawaasaa dabalatee xiqaa guddaa osoo hin jedhiin itti fayyadamnu qabna. Waa’yee Addis Ababa (Finfinnee) boruuf waan dhiifnu miti” jedhe.
Dr Kindee namni jedhamu ammo “wanti guddaan ummata biratti jijiirama ilaalchaa fiduudha. Ummanni seenaa dhugaa beekuu qaba. Kitaabnii Professor Habtaamuu Tagagn “Barara” jedhu naannoo amaaraa fi Finfinnee keessatti mana manatti galuu qaba. Kanaaf deeggarsi mootummaan naannoo Amaaraa murteessaa dha. Fulduratti kitaaba kana kitaabaa barnoota seenaa keessattis akka wabii tokkotti itti fayyadamuu qabna. Hojii Finfinnee irratti waggaa soddomaan duubatti hafneerra. Magaalli kun magaala Atse Daawit, magaala Amaaraa ta’u ummata beeksiisuu qabna. Dhugaa kana dubachuu maaliif qaqqaanoofna” jedhe.
Bakka buutoonni ADP fi ABIN kanarratti garaagarummaa ilaalchaa hin qabnu. Malaakuun “waay’ee Finfinne dhiyeenya kanatti wanti haraan jiraachuu danda’a. Walgahii keenya itti aanuutti Isiniif ibsina” jedhe.
Ajandaan inni biraan COVID-19 irraa akkamitti ummata naannoo Amaaraa baraarra kan jedhu ture. Isa nan dhiisa. Walumaagalatti Oromoon waan taa’aa jiru dammaqee hordofuu qaba. PP fi ABIN qindoominaan hojjachaa jiru.Keenya immo tokkummaa jabeesuu dhisee miidiyaadhuma isaani irratti dhiyaatee afaanuma isaanitin iccitii harcaasa.
Kaadiroonni Bilxiginnaa akeeka J/Kamaal Galchuu OBN irratti dhiheeffameef nutti himaa jiru. Akeekni sunis waan OMN aaf-gaaffii dhihoo kanaa sanirratti irraa mure akka inni dubbatuufi. OMN waan san gaafa irraa muru sababa amansiisaa tokko ibsee ture. Dhimmi sun waan tokkummaa keenyaaf hin malle waan taheef editorial policy-n OMN hin hayyamne. Akeekni Bilxiginnaa ammoo waan tokkummaa Oromoo fi paartiilee isaa diiguu barbaadanii jajjabeessuu waan taheef yaada sana akka inni dubbatu godhani. Bilxiginnaan mooraa Oromoo keessatti wal diigamsi akka dhalatu gochuuf hojjechaa jirti, jarri farra tokkummaa Oromooti yeroo jennu ragaan tokko kanuma. Garuu nu miidhuuf yaadanii osoo itti hin beekin nu gargaaran. Dhugaa fi kijibni akka adda bahu nu gargaaraniiru. Wayta kanatti hiriirri Kamaal kana tahuun na gaddisiisullee, ummanni keenya eenyutu maalitti jira kan jedhu akka hubatu godheera.
Hagamuu diinni qaawwa barbaaddettee seentee gargar cabsuuf dhamaatullee, tokkummaan ummata Oromoo sadarkaa boonsaa irra gahuu isaan argaa jira. Warri miira tokkummaa Oromootiin finiintanii tokkoon bakkayyuu falmaa jirtan hundi galanni keessan bilisummaa dha! Isinii jiruu abadan Oromoo fi Oromiyaan hin salphatani. Amma hiriirri jiru lamuma. Tokko hiriira gama Oromoo ti. Kan lammaffaa hiriira gama diinaa ti. Hiriira diinaa keessa bitamtoonni Afaan Oromoo dubbatu jiraachuun isin hin ajaa’ibin. Sun bara Wayyaanees, bara saniin duraas numa ture. Hiriira lachuu keessaa gara fedhe filatee goruun mirga abbaa ti. Oromoonis akkasitti firaa fi diina isaa adda beekkatee ofirraa dhoorka, irratti qabsaaya. Kana booda luka tokko diina keessa, luka kaan Oromoo keessa dhaabuun saba guddaa boonaa kana burjaajessuun hin danda’amu.
$10m) Kamal G/ Jawar Fi Bilxigina Malif walitii diruubarbade kaleesa Motumma tana dhiga dhabna jedhe
“Maqaan isaa Lammii Tamasgeen jedhama konkolaata Fe’umsaa kan yuniyeenii #Amboo lakkoofsa Gabatee 93466 kan ta’e dhimma hojiitiif magaala baddallee irraa gara naqamtee osoo konkolaachisaa jiruu galgala Naannoo sa’aa 12:30 tti humna addaa polosii Naannoo sana jiruun ba’umsa magaalaa irratti miidhaa guddan irra ga’ee ammatti bajajiidhaan hospitaala baddallee geessinee achitti yaalamaa jira. Qarshii 18000, waraqaa eenyummaa,mobayilaafi konkolaatas akka irraa fuudhame dubbata. Manni hojii fi maatiin isaa birmadhaa “
Kadir Martu ft Saliha Sami – As koottu NEW 2015 (Oromo Music)
Waraa Qabenyaa Fi Lafa oromo Sama Samsisa Turan Himaani Irati Baname Jiraa Karaa Qilinxoo Hatatamati
ODUU Hatattama Iccitii Bilxigina ABO TPLF PBO Jeel Marroo kuno itii dhiyadha | Moha oromo